Filazana · Jolay, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Filazana · Jolay, 2019
Jona 2019 28 Lahatsoratra
Aogositra 2011 8 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Filazana tamin'ny Jolay, 2019
Ireo lahatsoratra tselika an'ny Facebook: Avereno fafàna ireo lahatsoratrao raha nisy fanitsiana manan-danja natao
Mediam-bahoaka 25 Jolay 2019
Rehefa manavao lahatsoratra iray efa navoaka ianao, ny an'ny Facebook ho lany andro, tsy maintsy mampiasa an'ity fitaovana fanaovana 'debogage' an'ny facebook ity ianao mba "hanadiovana" an'ireo lahatsoratrao raha toa nisy fanovàna manan-danja natao an'izany lahatsoratra izany
Efa misy ankehitriny ny Lingua vaovao Nubian!
Miarahaba izao tontolo izao! Efa misy ankehitriny ny Lingua Nubian! Tsy maintsy milaza aho fa nofinofiko hatramin'ny naha-mpitantana ny Lingua ahy ny hanana ny Nubian eo amin'ny fitenintsika. Misaotra anao, Momen Talosh, noho ny fahavononanao hanara-maso ny fanombohana ny tetikasa!
Fiovana eo amin'ny fitarihana ny Lingua Paortiogey sy Frantsay!
Lasa vehivavy misolo vehivavy ny fitarihana amin'ireto ekipa roa ireto!
Vaovao mahafinaritra momba ny Lingua Espaniola!
Mediam-bahoaka 15 Jolay 2019
Nandritra ny taona maro, Juan Arellano no tonian-dahatsoratry ny Lingua Espaniola, manara-maso ny fandikana ny lahatsoratra GVAnglisy mankany amin'ny teny Espaniola. Tamin'ny Janoary anefa, nanambara i Juan fa hiala izy ka manomboka amin'ny 15 Febroary, i Gabriela Garcia Calderon no hisolo azy.
Tongasoa eto amin'ny Global Voices i Connie Moon Sehat
Mediam-bahoaka 11 Jolay 2019
Faly aho mampahafantatra an'i Connie Moon Sehat, talen'ny tetikasa vaovao ho an'ny tetikasa News Frames!
Fanavaozam-baovao NewsFrames Global Voices
Manakaiky ny fanombohan'ny tetikasa NewsFrames isika. Hanasonia ny fifanarahana amin'ny Digital News Initiative an'ny Google isika amin'ity herinandro ity, ary hanambara ny asa voalohany mifandraika amin'ny tetikasa, dia ny talen'ny tetikasa.
Endrika vaovao WordPress sy Lingua
Dika 10 Jolay 2019
Miarahaba, Jeremy developera ao amin'ny Global Voices ihany ity. Vao avy nanavao ireo tranonkala rehetra ampiasaina amin'ny endrika WordPress (4.5.3) izahay ary te-hampiseho endrika vitsivitsy mahafinaritra izay nampidirina vao haingana aho.
Nahazo ny loka Google Digital News Initiative ny Global Voices
Mediam-bahoaka 09 Jolay 2019
Nahazo ny loka Google Digital News Initiative ny Global Voices. Famintinana ny tetikasa sy ny antsipirihany.
Fivoriana NewsFrames: Boston, Septambra 2016
Mediam-bahoaka 05 Jolay 2019
Salama daholo! Araka ny nampanantenaina vao haingana, nanana fanombohana tsara ny NewFrames ary te-ahampahafantatra anao ny zava-mitranga izahay.
Ny fiteny rehetra eto amin'izao tontolo izao: fampahafantarana ny Wikitongues
Dika 04 Jolay 2019
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Febroary 2016) Hetsika ho an'ny zon'olombelona ny Wikitongues . Manorina ny arsivan'ny kolontsaina iombonana mbola tsy fahita hatramin'izay izahay miaraka amin'ireo mpandaha-teny sy mpampiasa ny fiteny rehetra eto amin'izao tontolo izao ary manaitra ny saina amin'ny fahasamihafan'ny fiteny ary mihetsika mba hiaro izany. Fikambanana tsy mitady tombontsoa...